किन हराउँदै छन् नेपाली मौलिक गीत ? – Everest Dainik – News from Nepal
किन हराउँदै छन् नेपाली मौलिक गीत ?
लोकसंगीतका पारखी चाबहिल निवासी २३ वर्षीया सृष्टि नेपाल पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा देखिएको विकृतिका कारण लोकगीतप्रतिको आफ्नो मोह घट्दै गएको बताउनुहुन्छ । “आजभोलि बजारमा आएका गीत सुनिनसक्नुका छन् ”, नेपालको बुझाइ छ । बजारमा आएका नयाँ छाडा गीतले नेपाली पहिचान गुम्दै गएकामा उहाँले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । “आजकलका गीत त सुन्न पनि छाडिसकेँ” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
स्वतन्त्र नेपाली गीतमा भन्दा पनि नेपाली चलचित्रमा लोकगीत घुसाउने गरेको पाइन्छ । ‘सान्नानीलाई भेट्न आउँदा रातै पर्यो बाटैमा’, ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ लगायत नेपाली चलचित्रको गीतमा नायिकाले गुन्युचोलो लगाएका छन् । तिनका दाँजोमा अचेल गाइने प्रायः लोकगीतमा उच्छृङ्खल शब्दको प्रयोग बढी छ ।
पहिले गीतको बजार सानो थियो, तर अहिले यो एउटा यो ठूलो उद्योगको रुपमा स्थापना भइसकेपछि प्रतिष्पर्धाका नाममा विकृति भित्रिएको छ ।
पहिले गीतको बजार सानो भएको तर अहिले यो एउटा यो ठूलो उद्योगको रुपमा स्थापना भइसकेपछि प्रतिष्पर्धाका नाममा विकृति भित्रिएको संस्कृतिविद् बताउँछन् । कुनै गीतका शब्द राम्रा भए पनि छायाङ्कनमा पहिरनको छनोट राम्रो पाइँदैन ।
‘तरकारी काउली बसी बसी खाउली’- कृष्ण समीप सुवेदीको यो गीतमा केही मौलिकता पाइए पनि पहिरनको छनोट भने सुहाउँदो छैन । सो गीतमा दिलीप रायमाझी र सावित्रा भुजेलको अभिनय छ । युट्युबमा सो गीतका विषयमा यस्तो प्रतिक्रिया छ, “गीतको सबै पक्ष राम्रो छ तर अभिनय गर्ने केटीको कपडाले पाउनुपर्ने नम्बर पाएन ।” नेपाली संगीतमा नयाँपन ल्याउँदै राष्ट्रियता बचाउने गीतमा नयाँपुस्ताको ध्यान बढी जानुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । मीना घोरसाइने ।-रासस
ट्याग्स: नेपाली मौलिक गीत, मौलिक गीत